Isitayela se-Avant-garde yeengubo
Imfashini yabasetyhini Isitayela
Isitayela se-Avant-garde yindlela yokwenza imfashini, ebonakaliswe ngemilo engavamile, ukusetyenziswa kwezixhobo ezingalindelekanga. Ekuqaleni, igama elithi "avant-garde" (isiFrentshi) lichaze inxalenye yemikhosi engaphambili, umsebenzi owawuza kuphelisa umgca wokhuselo lotshaba. Kancinci eli gama laqala ukusebenza kulo naluphi na uhlobo oluphambili lwexesha layo.
Ekuqaleni, i-front-gardism iqhubela iintlobo ezahlukeneyo zezinye izinto, ngamanye amaxesha zize zifikelele ekuchaseni ngokuthe ngqo kunye nenkcaso kwipolitiki nakwizentlalo. Kodwa zonke iinkalo zobomi bomntu zihlobene nomnye, kwaye isitayela esivela kwinqanaba elinye liza kudlulela kwabanye ngokubhekiselele kwiingxelo zabo. Imoya ye-avant-garde ngokuhamba kwesikhathi iye yaba yinxalenye yenkcubeko ethandwa. Njengohlobo lwezambatho, i-avant-garde ibonakale isondele kwiminyaka engamashumi ama-60 ekhulu lama-20. Uninzi lweetalenta ezikhazimulayo zafumana ithuba lokuzivakalisa ezi zinto ezigqithiseleyo kunye nokuzikhankanya, yindlela eyona ndlela ingcono yokukhupha ngaphandle kwakho ukukhupha umoya wakho wokuvukela. Omnye uphumelele umsebenzi ophumeleleyo, umntu ongekho kakhulu, kodwa wonke umntu, ngenxa yile style, wakwazi ukudala umsebenzi oyingqayizivele.
Okwangoku, isitayela se-avant-garde sinokufunyanwa phantse nawuphi na uhlobo lobugcisa, abantu abancinci abalingana ngazo zonke iindlela bazama ukuzibonakalisa, kwaye yile ndlela yokulinga eyenza indiza epheleleyo yefantasy.
Isitayela se-Avant-garde ngendlela ehambelana nefomathi ifana nempawu ezininzi: ukusetyenziswa kunye nokuhlanganiswa kwezixhobo ezingaqhelekanga kunye nemifanekiso, imilo, imigca, imibala, ukudala imilo ye-geometric eneempawu kunye nezinye iingubo ezingaqhelekanga, i-asymmetry, ukusetyenziswa kwezixhobo eziphathekayo, indlela engeyona yendabuko yokugqoka iimpahla. Naliphi na into eqhelekileyo inokuthi ibambe isitayela se-avant-garde, ukuba senziwe kwizinto ezingabonakaliyo okanye zidibanise ngokuphambene nombala webala. Kwiingubo ezinjalo akunakwenzeka ukuba ulahleke kwisihlwele, nokuba ngaba kuya kudala ukugqoka kwansuku zonke.
I-style avant-garde, okokuqala, yenziwa nguPetri Cardin. UPiard Cardin, omnye wabalingisi beemfashini ezinkulu kwihlabathi, unokuthi ufanele ukuba uthathwa njengalesi sikhokelo kwilizwe lefashini. Umqoqo wakhe oqokelelekileyo, ozinikele ekuqaliseni i-satelite yomhlaba wokuqala wokusebenza, ugcwala umoya wongaphambili. Ngokuqhelekileyo emsebenzini wakhe umyili umsebenzisi usebenzisa indlela yokulinga, yena, njengabanye, uhamba ukudibanisa. Iikholeji zakhe ezimnandi zicatshangelwa namhlanje njengendlela yesiseko se-avant-garde: ubuninzi beendlela ezingaqhelekanga zeenkcukacha, imibala eqaqambileyo, ukunika imilo emitsha kwizinto eziqhelekileyo-zonke ezi zinto zizisebenzisayo ngomsebenzi wakhe.
Ehlabathini yefashoni, kukho abaqulunqi befestile abaza kubandakanyeka kuphela kwi-front-garde direction. Abaninzi abaqulunqa ngezikhathi ezithile badala iqoqo elinobuchule obunzulu.
Abantu abadumileyo bakhetha isitayela se-avant-garden
UVienne Westwood - omnye wabokuqala wazama le ndlela kumsebenzi wabo kwimisebenzi yabo. Umsebenzi wakhe udlulile amanqanaba amaninzi - ukusuka kwiphikimeni enzima kunye neyantlonelo kwiimpawu zepolitiki kwi-T-shirts kunye ne-T-shirts.
Ngovuyo wayesebenzisa isitadi se-avant-garde kunye noNorma Kamali (uNorma Kamali) - oyinkosi yokuhlanganiswa okungavamile kwezizinto eziqhelekileyo. Wadala "ingubo yokulala" - umxube wengubo kunye nebhegi yokulala, ibhulukwe eyenziwe yengubo yeparachute kunye nezinye izinto ezihle.
Kwindlela yokuphambi kwegadi, abaqulunqi befashini abadumileyo njengoZandra Rhodes, abadumileyo ngokwenza izambatho ze-opera kunye nendawo yokuzonwabisa, u-Issey Miyake, odumileyo ngemisebenzi yakhe kunye nenhlanganisela yesimboli esiseMpumalanga kunye nowasentshona, wadala uYves Saint Laurent uRaymond Clark (umdali weengubo zobuncwane kunye nomnini weVictoria's Secret, xa ebonisa ukuqokelela kwakhe kweengubo zangaphantsi kwi-catwalk, "iingilosi" zahamba ngeenxa zonke), uGareth Pugh (umdali -Ingqoqo Enhle s), uAlex Zalewski (uMdali kuphela lweengqokelela ngokungaqhelekanga, kodwa kulungiselelwe isiboniso), Tatiana Cannon (umdali "karambolskogo" isimbo avant-garde) kunye nabanye.
Ehlabathini lanamhlanje, iifashthi zihlala zihlala kwiindawo eziphambili kwi-avant-garde ekufuneni kwayo into ethile. Le ndlela yokugqoka ngenxa yokuthandwa kwayo yayibandakanywe kwizinto zezifundo ezifundiswa kwiSikolo seMfashini yaseSan Francisco, enye yezona zikolo ezikhokelayo kwihlabathi lefashoni.
Ukusetyenziswa kwayo kwiingubo
Isitayela se-Avant-garde asiyena wonke umntu, okanye kunokuba kuya kuthiwa, le ndlela ayifanelekanga imfashini yesitalato . Kodwa kuyafaneleka ngokufanelekileyo kubantu bokudala, kunokwenzeka ukuba uyisebenzise ngexesha lobusuku be-gala okanye omnye umcimbi osisigxina. Izambatho kwisitayela se-avant-garde asikho nje inqwaba yeenkcukacha eziqaqambileyo, ithwala intsingiselo eyimfihlo, eyenzelwe ukutyhila ihlabathi langaphakathi lomntu.
Isitayela se-Avant-garde sithetha ukusetyenziswa kwezixhobo ezithile ezizodwa - ezi zixhobo zokusebenza, ukuzenza kunye nekhanda.
Izixhobo, kunye nezambatho, zineenkcukacha zobunono. Ngokuqhelekileyo zixhaswa kwaye zihlala zenziwe ngezandla. Izinto eziphathekayo zisetyenziselwa ukusebenzisa izitye, amatye kunye nemithi Izambatho zivame ukuhlotswa ngeemibhobho zangaphambili kunye neenkinobho. Isikhwama sikhethwe ngokwemibala yobuhlanga, isantya okanye isithotho, ngamanye amaxesha i-clutch ingakwazi kwakhona.
Iingqapheli, njengomthetho, zibonakalisa iindlela eziphambili kakhulu okanye zenziwe ngezinto eziqhelekanga. Ingaba njengezicathulo ezinesithende, ngaphandle, okanye kwisiqonga.
I-styles, eyenzelwe indlela yokugqoka i-avant-gard garde, ithetha ukuba inqwelo engenakulinganiswa yembono - kunokwenzeka ukudibanisa imibala eyahlukahlukeneyo, ukunika iifom ezingenakucingeka, ukuzalisa i-hairstyle ngezinto eziphathekayo ezahlukileyo, ngokubaluleke kakhulu, ukuba ayikugijimali kwisithingi.
Iifayile eziqhelekileyo ziphantsi kwesitayela se-avant-garde zenziwe ziqhakazile, kodwa kunokwenzeka kwaye kungabikho kokwenza.
Isitayela se-Avant-garde - kunye nezambatho, kunye ne-makeup, kunye neenkcukacha zisekelwe kwinkululeko epheleleyo yokukhetha zonke iintlobo zokudibanisa. Kodwa oku akunjalo ukutshitshisa konke kulandelelwano, ngenxa yoko, umfanekiso kufuneka uphumelele, kungakhathaliseki ukuba ungavamile.
I-stylish kunye nesimo sombuso
Ingubo yohlwaya yowesifazane ozele
Ungazifihla njani ukungaphumeleli komfanekiso phantsi kweengubo?
Imfashini yabasetyhini abaphakathi
Ziziphi iimpahla zokukhetha, ukuya kumhla wokuthandana
Ziziphi iimpahla ezifanelekileyo kubasetyhini abaphantsi?
Ukuphuhliswa kwengqondo kubantwana abancinci
Ukubamba umntwana ezandleni zakho: ntoni le phupha ebangela ubomi bakho?
Amaphupha ama-Erotic ngemifanekiso
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kwi-prom 2016
Yintoni enokuyenza ukuze indoda ithande ibe namandla
Indlela yokukhetha ityayi kwihembe
Iyintoni isondo esikhulu kwindoda yesilisa?
UJulia Snigir okhulelweyo uvele kwi-studio ye-Ivan Urgant
Imidiya ijongela i-alamu: U-Angelina Jolie ugule ukufa
Imihlobiso yoNyaka omtsha 2018 ukusuka kwiphepha kunye nezinto ezenziwe ngesandla - ezenziwe ngezandla zanamuhla kunye nesitayela se-USSR
Yintoni kufuneka umama oselula?
Ukutya okuqhelekileyo koLwandle lwaseNtaliyane
Imvume yokuvumela: ukudweba
Indlela yokwenza isobho kwi-celery yokulahleka kwesisindo?
I-plum cake nge-walnut scythesel
Ukufundisa umculo kubafundi bezemfundo, indlela
Ukutya okusebenzayo ngokutya kwabantwana
ISigramente yomtshato: khetha iingubo zomtshato ebandleni